Arkady Renko akateedzana, mutikitivha weRussia waMartin Cruz Smith | Zvazvino Zvinyorwa
Arkady renko mutikitivha russian protagonist yenyaya dzinoverengeka dzakanyorwa nemunyori weNorth America Martin Cruz-Smith. Kutanga kuoneka mukati Gorky Park, muna 1981, uyezve pakava nezvimwe 7 mazita zvimwe izvo zvakabudirira kwazvo nevatsoropodzi neruzhinji, pamusoro pekugamuchira mibairo yakati wandei yerudzi rwevatema, saEdgar kana Hammett. Mumazuva ano ekuvharirwa ndakaverengazve mamwe. Saka ipapo ongororo iyi inoenda. Kune avo vasingazvizive kana kuzvizorodza kune avo vanozviziva.
2 Arkady Renko akateedzana
2.2 Nyeredzi Polar
2.3 Iyo Red Square
2.5 Wolf nguva
2.6 Chipoko chaStalin
2.7 Mwaka mitatu
Chinhu chekutanga chakandikwezva kuna Arkady Renko chaive icho dhirowa kufa kwehupenyu uye kusagadzikana yehunhu hwavo, chaihwo hwezvavanowanzodaidza kuti "Russian mweya". Uye zvinosetsa, kuve iko kusikwa kwemunyori weAmerica aine madzitateguru eSpanish saMartin Cruz Smith. Zvakare, pakusangana naye mukati Gorky Park, uye nekuda kwezvakaitika nevabereki vake, tinonzwisisawo izvozvo maitiro ekutsoropodza uye kuzviparadza. Asi zvakare zvakanyanya akachenjera, kusava nechokwadi Akatarisana netarisiro yakanaka yenguva yemberi, kunyanya kwaari, uye panguva imwechete, haagone kubatsira kungofungidzira, kusaora. sensible y kukudzwa. Anozviratidza pese paanodanana, kunyangwe angave achiziva kuti rudo irworwo rwunomutorera sei.
Mhosva dzako mune dzakateedzana dzinokutora iwe kuburikidza nevamwe países, sezvo iyo Nyika dzakabatana kuCuba, uye dzimwe nzvimbo senge Chernobyl. Makorewo achapfuura kwaari, nekubva makore makumi mapfumbamwe tichasvika pa Era Putin, uko nyaya yake yekupedzisira inoitika, Tatiana.
Nhevedzano ye Arkady renko
La yekutanga novel pamwe ndiyo chinonyanya kuzivikanwa. Rakadhindwa muna 1981, mariri Arkady Renko anoongorora iyo kuoneka kwezvitunha zvitatu inowanikwa muMoscow yeGorky Park. Zviso zvavo nezvigunwe zvemunwe hazvipo, zvichidzivirira kuzivikanwa. Renko anozoona kuti nyaya yacho ine zvinorehwa nenyika dzese. Asi ese ari maviri KGBla vapfumi Soviet uye a asina hunyanzvi muzvinabhizimusi wekuAmerica ivo vanoda kubvisa Renko kubva kuferefetwa. Zvese zvavanowana ndezvekuti anoomerera pakuzvigadzirisa zvisinei nemhedzisiro yake. Uye pakati pazvo zvese Kuvira murudo kubva kumukadzi haazive kana achigona kuvimba futi.
Musoro ndiwo fekitori zita rechikepe mune ayo network anoonekwa muviri wemusikana iyo ndeyako vashandi. Y Arkady Renko anoshanda pazviri, inguvai muongororisezvo akabviswa pachigaro nekuda kwe "zvematongerwo enyika" mushure menyaya yeGorky Park. Uye kunyangwe ichitaridzika senge kuzviuraya, kaputeni wengarava anokumbira kuti uongorore.
Iyo Red Square
Gara mushure kuwa kwechikominisiti, mune ino novel Arkady Renko anofanirwa kuongorora iyo kufa kwemubhengi kwakabatana nepasi. Uye achasangana zvakare Irina Asanova, mukadzi waanoda ndokusangana mukati Gorky Park uye icho chaive zvakare chikonzero chekudonha kwake kubva munyasha mukati mehurongwa.
Panguva ino Renko achafanirwa kuenda kuHavana ku Ziva chitunha chemuRussia izvo zvaratidzwa ipapo. Renko achawana guta raasina kufungidzira kudaro uye rinomunetsa. Iwe zvakare uchafanirwa shanda nemapurisa akanaka eCuba, uye ivo vanozoonekwa vane tsika dzeSanteria, muAmerican mutizi uye boka re mamenari. Asi iwe unotora nguva shoma yekunakidzwa nechimwe chinhu chehupenyu hwako.
El kuzviuraya yaPasha Ivanov, mumwe wevabhirionia vatsva veRussia, inyaya iyo iyo Arkady Renko ichafanirwa kugadzirisa uye kuti zvimwe ichave enigmatic zvakanyanya kusvika zvino. Mhosva iyo inokuendesa iwe ku Chernobyl, nharaunda inozoita kuti kuferefeta kuwedzere kusagadzikana.
Zvakare kumisikidzwa muMoscow, inotitaurira nezve chishamiso chiitiko chinoitika kana vafambi vanoverengeka vepasi pevhu vanoti vaona chipoko chaStalin mune chimwe chiteshi chayo. Izvo zvinoita sezvisingakoshi zvinosvika pakuve zvakakomba apo Renko anowana izvo matikitivha maviri ane mbiri zvinogona kudaro kubatanidzwa. Iko kunofungidzirwa kutaridzika kwakabatana ne bato rezvematongerwo enyika weumwe wematikitivha murwi. Uye iro bato rinovanza data rakakosha nezve zvakaitika mu Chechnya muma 90. Asi Renko achawanawo zvimwe zvakavanzika kudanana neiyo Hondo Yenyika Yechipiri.
Na Tren kumashure, a amai vechidiki uye ndega uye a musoja aine vavariro dzakaipa kwaari, mune ino nhoroondo Renko achafanira kuongorora iyo kutsakatika kwemucheche izvo zvisina kana mutsindo.
Musoro wekupedzisira wakaburitswa unotaurira kuitika pakati pekufa, muvhiki imwe chete, yemutori wenhau asina hanya, Tatiana Petrova, uye bhirionea mobster. Arkady anochengeta zviitiko zviri zviviri mu Kaliningrad, "Chakavanzika guta" rehondo inotonhora. Uye nekuongorora zvakapfuura zvaTatiana, Arkady achawana vana kusiiwa nebhuku remuturikiri akafawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Arkady Renko akateedzana, mutikitivha weRussia waMartin Cruz Smith